पत्रकार पुडासैनी आ त्मह त्या प्रकरण : दुईजनाको बयान सकियो, रविको जारी – PanchKhal Online
Home/समाचार/पत्रकार पुडासैनी आ त्मह त्या प्रकरण : दुईजनाको बयान सकियो, रविको जारी
पत्रकार पुडासैनी आ त्मह त्या प्रकरण : दुईजनाको बयान सकियो, रविको जारी
माउण्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको झुन्डिएकै कारण मृ त्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार पुडासैनीको गर्धनको हड्डी छुट्टिएको र घाँटीसमेत डोरीले कस्सिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पुडासैनीले आत्महत्या गरेको उल्लेख रहेको संकेत जिप्रका चितवनका प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले गरे । ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ । मंगलबार सम्पूर्ण रिपोर्ट लिएर म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्छौँ । रिपोर्टमा हामीले पहिले जे आशंका गरेका थियौँ, त्यही नै भएको उल्लेख छ,’ उनले भने ।
भिडियोमा रहेको आवाज पुडासैनीकै भएको पुष्टि
पुडासैनीले मृ त्युअघि रेकर्ड गरेको भिडियोमा भएको आवाज उनकै भएको फरेन्सिक ल्याब परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ । उनको मोबाइलमा विभिन्न पाँचवटा लामा र छोटा भिडियो क्लिप रहेको स्रोतले जनाएको छ । फरक–फरक भिडियो क्लिपमा भएकै कारणले पुडासैनीको आवाज फरक सुनिनुका साथै हाउभाउ पनि फरक देखिएको तथा एक अवस्थामा सिरानी रहेको र अर्को अवस्थामा सिरानी नरहेकोजस्तो फरक दृश्य देखिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
आ त्मह त्याका लागि डोरी किनेको पसल पत्ता लाग्याे
पोस्टमार्टम र भिडियो ल्याब दुवै रिपोर्ट थप अनुसन्धानका लागि बलियो प्रमाण बनेको प्रहरीको भनाइ छ । पत्रकार पुडासैनीको मृ त्यु प्रकरणसँग जोडिएका प्रमाण संकलनका क्रममा चितवन प्रहरीले सोमबार उनले आ त्मह त्याका लागि डोरी किनेको पसल पत्ता लगाएको छ । नारायणगढ बसपार्कस्थित एक प्लास्टिक पसलमा गई उनले पाँच मिटर लामो डोरी किनेको सिसिक्यामेरा फुटेजसमेत प्रहरीले लिएको छ ।
पत्रकार पुडासैनीको मृ त्यु प्रकरणसँग जोडिएका प्रमाण संकलनका क्रममा चितवन प्रहरीले सोमबार उनले आ त्मह त्याका लागि डोरी किनेको पसल पत्ता लगाएको छ । नारायणगढ बसपार्कस्थित एक प्लास्टिक पसलमा गई उनले पाँच मिटर लामो डोरी किनेको सिसिक्यामेरा फुटेजसमेत प्रहरीले लिएको छ ।
पुडासैनीको भिडियो हेरेको छैन : रवि
पुडासैनी मृ त्यु घटनाको अनुसन्धानकै लागि भनेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का प्रवक्ता एसपी दीपक रेग्मी चितवन आएका छन् । पुडासैनीकी श्रीमतीले आइतबार प्रहरी परिसर टेकुमा किटानी जाहेरी दिएकी छिन् । त्यो जाहेरी चितवन प्रहरीले पाइसकेको छ । लामिछानेका समर्थकहरूले सोमबार पनि भरतपुरमा प्रदर्शन गरेका छन् । भरतपुर चौबीसकोठीमा प्रदर्शन गर्ने पाँचजनालाई गि रफ्तार गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
पत्रकार पुडासैनी आ त्मह त्या घटनाका आरोपीसँग बयान लिने क्रम जारी छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार अस्मिता कार्कीसँग र सोमबार सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने तथा युवराज कँडेलसँग बयान लिएको छ । तर, लामिछानेसँगको बयान भने अझै नसकिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।
कँडेल र कार्कीले भने इन्कारी बयान दिएको स्रोतले जनाएको छ । लामिछानेसँग मंगलबार पनि बयान लिइने भएको छ । आरोपीद्वय कँडेल र कार्कीको बयान सकिएपछि लामिछानेसँग सोमबार दिउँसो तीन बजेपछि बयान लिन सुरु गरिएको थियो । बयान बेलुकी ६ बजे स्थगित गरिएको थियो । प्रारम्भिक बयानका क्रममा मृ तक पुडासैनीसँगको चिनजान, कामको सिलसिला, व्यवहारबारे लामिछानेसँग जानकारी लिइएको छ ।
आज अमेरिकी डलरसहित सबै देशको भाउ बढ्यो, कुन देशको कति ? हेर्नुहोस् …
रबि लामिछाने पक्राउ परेपछि रमेश प्रसाई मध्यरातमा मिडियामा
पर्खाल भत्किएर के भो, साहस र हिम्मत नभत्किए रंगशाला बन्छ ! – रवि लामिछाने